Tsy Araka Izay Lazain’ny Haino Aman-Jery Sosialy, Tsy Napetraky ny Filohan’i Serbia Ho Anaran-dàlana Ny Anaran’Ilay Mpanao Heloka Bevava, Ratko Mladić · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2017 8:54 GMT
Vakio amin'ny teny Português, русский, Español, Italiano, Français, English
Dikasariny avy amin'ny vaovao fanadihadiana momba ilay hetsika fanohanana an'i Ratko Mladić tamin'ny 2007, ahitàna ny filoha Serba am-perinasa Aleksandar Vučić, 10 taona talohan'ny nandraisany ny toerana. Mametaka takelaka mivaky hoe ‘Ratko Mladić Boulevard’ izy eto amin'ny sary.
Sary efa tamin'ny folo taona no nampiasaina hamitahana ireo mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy mba hino fa nomen'ny Filoha Serba Aleksandar Vučić ny anaran'ilay mpanao heloka bevava an'ady voaheloka, Ratko Mladić, ny làlana iray.
Taorian'ny fitsaràn'ny Firenena Mikambana izay nanasazy ilay komandà serba bosniàka taloha, Ratko Mladić, higadra mandra-pahafaty noho ny fandripahana faobe tamin'ny adin'i Bosnia tamin'ny taona 1990, dia nanomboka nampahatsiahy izao tontolo izao momba ny fifandraisany tamin'ireo kilasy politika Serba amin'izao fotoana izao ireo mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy any Balkàna — sady nanaparitaka vaovao tsy marina.
Sary namboarina iray tahaka izany, tsy marina, aparitaka amin'ny aterineto, milaza fa vao haingana no nanome anarana làlana “Ratko Mladić Boulevard” ny filoha am-perinasa sady mampiasa sary mampiseho an'i Vučić mametraka ilay takelaka famantarana misy ilay anarana. Ohatra iray mampiavaka izany ity bitsika manaraka ity :
Vao voasazy higadra mandra-pahafatiny i Ratko Mladic noho ny fandripahana faobe sy ireo heloka bevava nataony tamin'ny maha-olona.
Nametraka anaran-dàlana hoe Mladic ny filohan'i Serbia “Eoropeana” am-perin'asa.
Tsy namboarina tamin'ny ‘photoshop’ ireo sary ireo, saingy naseho tsy mifanaraka amin'ny zavamisy, ka nahatonga ireo fanambaràna amin'ny ankapobeny ho diso. ” Tsy takelaby” ilay marika famantarana, fa peta-drindrina nasiana ‘scotch’. Raha ny marina, tsy nisy làlana nampitonraina ny anaran'ilay olo-malaza, Mladic.
Tamin'ny 26 May 2007, dia nandray anjara tamin'ny hetsika fanoherana ny fanovàna ny anaran'ilay làlana iray tao Belgrade ho amin'ny anaran'i Zoran Đinđić , ilay Praiminisitra Liberaly nisy namono, i Vučić amin'ny maha-Sekretera Jeneralin'ny Antoko Radical Serba (SRS) tia tanindrazana faratampony avy amin'ny hery faran'ny havanana azy. Zoran Đinđić praiministra izay nisy namono tamin'ny 2003 taorian'ny nanombohany ny fiaraha-miasa tamin'ny Fitsarànaao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny Heloka Bevava ho an'i Yogoslavia teo aloha (ICTY). Nitaondra nankany amin'ny fampodiana ny Filoha teo aloha Slobodan Milošević, ilay mpanohana fototra an'i Ratko Mladic io fiaraha-miasa io.
Tao amin'ilay hetsi-panoherana, nifandona tamin'ireo Liberaly izay nanohana ilay anarana vaovao ireo Serba Nasionalista. Nilanja sora-baventy sy sary manohana an'i Mladić izay nandositra ny fitsaràna tamin'izany fotoana ireo nasionalista.
Amin'ny maha-mpikamban'ny SRS azy, niasa tamin'ny naha-minisitry ny Fampahalalàm-baovao tamin'ny fitondràn'i Milošević i Vučić nanomboka ny 1998 ka hatramin'ny 2000. Tamin'ny 2008, taorian'ny nisintahan'ny elatra mpomba ny Vondrona Eoropeana tamin'ny Antoko Radikaly ka namoronany ny Antoko Serba Liampivoarana, dia nanatevina lahazrana an-dry zareo ireo i Vučić
Tamin'ny 2014, taorian'ny naha-lasa Praiminisitra an'i Vučić, navoakan'ny Truth-o-meter, tranonkala serba iray mpanamarina ny zavamisy, ity tahirinà horonantsary mampiseho ny hetsika tamin'ny ity mba ho ampahany amin'ny ezaka ataon-dry zareo hampiroboroboana ny tahirin-kevi-panjakana.
Fony teo amin'ny fitondrana, notsatsoin'i Vučić izay rehetra lahateny nasionalista mandresy lahatra, tamin'ny fiezahany namorona sary an'ohatra mpanao politika iray izay mamboatra fefy hiavahana amin'ireo mpifanolo-bodirindrina. Tamin'ny 2015, dia in-droa nitsidihany ilay tanàna Bosniaka Srebrenica, toerana nanatanterahan'ny tafika Serba bosniaka nobaikon'i Mladić ilay fandripahana tamin'ny 1995. Rehefa naneho fanajàna ireo niharan-doza sy nanameloka ilay fihetsika ho “heloka bevava mahatsiravina” i Vučić, dia nitazona ihany koa ny fitsipika ôfisialy izay tsy manaiky ny fampiasàna ny teny hoe fandripahana ampifandraisina amin'i Srebrenica, na eo aza ireo didim-pitsaràna navoakana'ny ICTY.
Tsy milaza fanohanana ampahibemaso an'ireo mpanao heloka bevava tamin'ny ady ny fanambaràna nataony taorian'ny didim-pitsaràna navoakan'ny ICTY momba an'i Mladić. Na nilaza aza izy fa tsy misy afa-tsy ny Serba ihany no mikarakara ireo serba niharan-doza tamin'ny ady tamin'ny 1990, dia nambarany fa aleo ‘mandroso ho amin'ny hoavy isika ary mihevitra izay toerana hiveloman'ny zanatsika” toy izay hanatsinkafona ny lasa… ” Tsy tokony ho sempotry ny ranomason'ny lasantsika isika, fa hilona amin'ny hatsembohan'ny ezaka ataontsika amin'ny fananganana ny hoavy iombonana.”
Ankehitriny, ireo sary avy amin'ny hetsika tamin'ny 2007 dia ampiasain'ireo mpitsikera isankarazany mba hanakorntanana ny sain'i Vučić amin'izay lazain'izy ireo ho fihatsarambelatsihy, fara-fahakeliny avy amin'ny ankolafy roa. Ampiasain'ireo mpanohitra ny nasionalisma Serba mba hanolorana azy ho toy ny radikaly tsy misokatra izany, raha toa ka mitsikera ny fihetsiny ho modaka kosa ireo serba nasionalista mahery fihetsika.